सोनक्षी सिन्हाले किन गुहारिन् प्रहरी ? – Suchana Hub
सोनक्षी सिन्हाले किन गुहारिन् प्रहरी ?
काठमाडाैं । बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाले सामाजिक सञ्जालमा आफुविरुद्द जथाभावी लेख्नेलाई प्रहरी हिरासतमा पु-याएकी छन् । केहि समय यता सोनाक्षी लगायात बलिउडका कलाकारहरुको सामाजिक संजालमा निकै आलोचना भैरहेको छ भने यसविरुद्द उनले कानुनको सहारा लिएकी छिन । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
उनले सामाजिक सञ्जालबाट महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध एउटा भिडियो बनाएर सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनको त्यस भिडियोलाई धेरैले रुचाए पनि केहीले टिप्पणी गरेका थिए । महाराष्ट्रका शशिकान्त गुलाब जाधवले अभिनेत्री सोनाक्षीको उक्त भिडियोलाई गलत तरिकाले प्रचार गरेर उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न आपत्तिजनक शब्दहरू समेत प्रयोग गरेका थिए जसप्रति सोनाक्षीले गत ७ अगस्टमा मुम्बईको क्राइम ब्रान्चमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
उनको उजुरीको आधारमा प्रहरीले ती व्यक्तलाई महाराष्ट्रको औरंगावादबाट पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ भने ती व्यक्तिविरुद्ध साइबर क्राइमअन्तर्गत मुद्दा चलाउने प्रहरीले बताएको छ ।
Previous सीबीआईको कठघरामा रिया चक्रवर्ती
Next सुशान्त मृत्यु प्रकरण थप जटिल बन्दै : पोस्टमार्टम रिपोर्टमै आशंका
8 months ago सुचना हब : संवाददाता